Igbe Grey Na-egbochi Ozi Na My iPhone. Idozi! - Iphone
otu esi eziga nsonaazụ na ios 10
mmanụ lavender maka chinchi
ị ga -akwụ ụgwọ maka icloud
Igbe Grey Na-egbochi Ozi Na My iPhone. Idozi!
Nweghị ike ịzaghachi ozi ederede n'ihi na igbe isi awọ nwere 0:00 na-egbochi gị ịpinye ederede na ngwa Ozi na iPhone gị. Ọtụtụ ndị mmadụ malitere inwe nsogbu a ozugbo Apple wepụtara iOS 9. N'isiokwu a, anyị ga-eje ije na ndozi dị mfe na kpochapụ ihe ntụ ntụ ntụ na-egbochi gị izipu iMessages na ederede na iPhone gị .
Igbe isi awọ ga-apụta mgbe izipu ozi ọdịyo na ngwa Ozi. Nọmalị, ị pịa ma jide akara ngosi igwe okwu n'akụkụ aka nri nke igbe ederede na igbe isi awọ pụtara ka ị na-edekọ olu gị.
iphone agaghị ejikọ na wifi
Nke ahụ bụ ebe elekere 0:00 na-abịa: Glitch na ngwa Ozi na-eme ka igbe isi awọ pụta n'ihu igbe ederede, ọ bụ ezie na o kwesịrị ịnọ na nzuzo mgbe ị naghị edekọ ọdịyo. The 0:00 na-ezo aka 0 nkeji na 0 sekọnd nke ndekọ olu, na ị ga-mgbe ahụ na ọ gwụla ma ị na-Ndekọ ọdịyo.
Enweghị mpempe anwansi nke na-edozi iPhone onye ọ bụla, mana ọ bụrụ na ị gbasoo aro ndị a, enwere m ike ijide n'aka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100% na anyị ga-edozi nsogbu igbe isi awọ maka nke ọma. Enwere ike ịlele ngwa ngwa Ozi mgbe usoro ọ bụla iji hụ ma edozi nsogbu ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, gaa na nzọụkwụ ọzọ.
Etu aga esi dozie igbe isi awọ nke na - egbochi gị izipu ozi ederede na iPhone gị
1. Mechie Ozi App
Pịa bọtịnụ Home (bọtịnụ okirikiri n'okpuru ngosipụta) ugboro abụọ wee swipe ngwa Ozi ahụ dị n'elu ihuenyo gị ka imechi ya.
2. Tụgharịa gị iPhone Off na Back On
Pịa ma jide bọtịnụ ike ruo mgbe slide ka ike gbanyụọ na-egosi. Swipe akara ngosi site n'aka ekpe gaa n'aka nri ma chere ka iPhone gị gbanyụrụ - ọ ga-ewe ọtụtụ sekọnd. Gbanwee iPhone gị site na ijide bọtịnụ ike ruo mgbe akara Apple gosipụtara na ngosipụta ahụ.
3. Bugharia ‘Gosi Ubi Isiokwu’ na ‘Agwa Akpara’
Gaa na Ntọala -> Ozi ma gbanye Gosi Ubi Isiokwu na Agwa Agwa. Mechie Ntọala ma laghachi na ngwa Ozi. Ohere inweta bụ na ị doziwo nsogbu ahụ - mana ị nwere ike ịchọghị ntọala ndị a ka ebighi ebi. Laghachi Ntọala -> Ozi ma gbanyụọ Gosi Ubi Isiokwu na Agwa Agwa . N'ọtụtụ oge, ịgbanye ntọala ndị a ma laghachi azụ ga-ewepụ igbe isi awọ na Ozi.
4. Tụgharịa iMessage Gbanyụọ ma Gbanye
Gaa na Ntọala -> Ozi na enweta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mgba ọkụ n'aka nri nke iMessage iji gbanye iMessage. Younweghị ike izipu ozi ọnụnụ mgbe iMessage na-apụ, yabụ igbe isi awọ ga-apụ n'anya. Ọ bụrụ na igbe ntụ ntụ ka dị, mechie Ozi ngwa dị ka m kọwara na Nzọụkwụ 1, mepee ya, ma lelee ya ọzọ.
enweghị ike inyocha njirimara sava anaghị atụkwasị obi
iMessage bụ oke atụmatụ, ma eleghị anya ị gaghị ahapụ ya. Isi laghachi na Ntọala -> Ozi ma gbanwee iMessage azụ. Mgbe ị mepee ngwa Ozi, igbe ntụ ntụ ga-apụ.
N'isiokwu a, anyị doziri igbe ntụ ntụ na-egbochi gị izipu ozi ederede na iMessages na iPhone gị. Ọ bụ glitch na ngwa Ozi na iOS 9, Apple ga-edozikwa ya n’oge adịghị anya. Ruo oge ahụ, ọ ga-amasị m ịnụ nke kwụpụrụ gị nsogbu ahụ na ngalaba ndị dị n'okpuru ebe a.